We She Me: ငါက တိုးရစ်ကွ
nyein2xsoe - 8/4/08, 4:14 PM
I m glad to hear that my dad is happy at there.I m worry about my dad at the beginning when going to auzi coz he is not happy to live so long in one place except Taunggyi.Dad is always happy living in Taunggyi.Now I don't worry abt my dad.Thanks alot my bro and sis.
မျိုးဝင်းဇော် - 8/4/08, 4:20 PM
ဟားဟား အဆုံးသတ်ပုံမဆိုးဘူး “ယောက္ခဖ” မပြောနဲ့ ယောက်ခထီး ဆိုတာတောင် ဆရာလူထုစိန်ဝင်းတို့ကမကြိုက်ဘူးတဲ့ ဒီလိုအသုံးအနှုါံ်ကို သတိထားပြီးရှောင်တယ်တဲ့ ဇနီး၏ပါးပါး ဟုပြောင်းခေါ်သင့်သည်။ ကျွန်တော်မိန်းမရရင်တော့ အစမ်းခေါ်ကြည့်အုံးမယ်.. အသက် သုံးဆယ်ကျော်လူပျိုလေးသည် ကိုအန်ဒီတို့မိသားစုကိုအားကျနေလို့ပါ ဟားဟား
Andy Myint - 8/4/08, 4:29 PM
ကျွန်တော် အမှတ်မှား သွားတာ ကိုမျိုးဝင်းဇော်… ဖတ်တာနည်းနည်းကိုပဲ ရောထွေး ရှုပ်နေတာ.. အစပြန် ဖော်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ယောက္ခထီးလို ပြင်လိုက်ပြီ။
Anonymous - 8/4/08, 4:52 PM
အဟဲ ကိုအန်ဒီ နဲ့ အမ တရားစခန်းဝင်မယ့်ပုံစံလေး ခုတည်းက မြင်ယောင်ကြည့်လိုက်တယ် ။ သားသမီးတွေ ဂရုမစိုက်တော့လို့ မဟုတ်ဘဲ ၊ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်လို့ တရားစခန်းဝင်ကြတဲ့ပုံစံ ပေါက်နေတယ်လလို့ ခန့်မှန်းလိုက်ရတယ်း)
Aung Myo Htet - 8/4/08, 5:21 PM
Andyရေ၊ ကြွေးဟောင်းနဲ့ အသစ်အကြောင်းကတော့ မင်းနဲ့ပေါင်းပြီး တစ်postတောင် ရေးလိုက်ချင်သေး။
မဇနိ - 8/4/08, 6:00 PM
အမ် ကိုအန်ဒီကတော့ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ တရားစခန်းဝင်ရင်တောင် အမကို အဖော်ခေါ်နေတယ် သိနေတယ်နော် သိနေတယ် “တိန်“
nu-san - 8/4/08, 9:52 PM
ဟိ..ဟိ တရားစခန်းပဲဝင်မလား. သားတွေ သမီးတွေဆီ အခု ဘိုးဘိုးဖွားဖွားတွေလို တိုးရစ်ကြီးလုပ်ပြီး လိုက်လည်ကျမလား ကြည့်ရဦးမယ်.. ဟုတ်တယ်မို့လား... Andy နဲ့ ကလေးတို့မေမေ :D
အမကတော့ ကြွေးဟောင်းလည်းမကြေ၊ ကြွေးသစ်လည်းမချနိုင်နဲ့.. အဟီး.. ကြွေးတွေပူနေတယ်.. :D
တန်ခူး - 8/6/08, 2:34 PM
ကိုအန်ဒီရေ… မျိုးရိုးလိုက်မှာ ပိုများသလားပဲ… တရားစခန်းဝင်တာနဲ့ စာရင်လေ… အဲဒီအခါ ကိုအန်ဒီက ယောက္ခထီး အဖြစ်နဲ့ ပေါ့… နောက်တာနော်…စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးမိုလား…
Andy Myint - 8/6/08, 9:40 PM
အဟီး အဖြစ် ပြောတာပါ တတီတီဂျစ်ရယ်.... :)
ကောင်းသားပဲ အောင်မျိုးထက်.. ငါတို့တွေက ဘ၀တူတွေ ဆိုတော့
အဟီး.. သံယောဇဉ် မီးတွေလေ... မဇနိရဲ့
သားသမီးတွေဆိုတော့လည်း ငြင်းလို့ ဘယ်ကောင်းမလဲ မနုစံရယ်...
အဲဒီလို ဆိုလည်း ကောင်းတာပေါ့ မတန်ခူး.. ငါက တိုးရစ်ကွ လိုမျိုး ပြန်ပြောရရင် ဘယ်လောက် နိပ်လိုက်မလဲ...